Manao ‘Fitokonana Tsy Hita Maso’ Ireo Mpisera Amin’ny Aterineto Thailandais, Manohitra Ny Tetikasa Vavahady Tokan’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2015 2:55 GMT
Avy tamin'ny pejy Facebook-ny “Citizens against Single Gateway” (Olom-pirenena manohitra ny Vavahady Tokana)
Voatery nakatona ireo vohikala lehibe maro an'ny governemanta tany Thailand ny 30 Septambra, raha nanomana olona iray alina hitsidika sy hanavao ireo pejy fampidiran'izy ireo, ireo mpikatroka amin'ny Aterineto, mandra-panakatonana ireo vohikala noho ny habetsahan'ny serasera be loatra.
Samy lasa maizina daholo ireto vohikala ireto nandritra ny ora vitsy : ireo vohikala Foiben'ny Tafi-Panjakàna Mitam-piadianaThailandais, ny an'ny Kabinetran'ny Praiminisitra, ny an'ny Kaomandin'ireo Hetsika Fiarovana Anatiny, ny an'ny Minisiteran'ny Teknolojian'ny Serasera, sy ny an'ny Tranon'ny Governemanta. Nanao ny hetsika lazain'izy ireo ho tsy faneken'ny olompirenena ireo mpikatroka mafana fo, hanoherana ilay sosokevitra vao haingana ny hanaovana vavahady tokana ho an'ny Aterineto any Thailand.
Hanampy amin'ny ‘fanarahana maso ny fidiran'ny vaovao’ ilay vavahady
Gaga tamin'ny fahafantarana ilay sosokevitra ireo vahoaka, raha navoaka tamin'ny vohikalan'ny governemanta ny tsoakevitry ny fivoriana vao haingana nataon'ny Kabinetra. Tsy nanome andinindininy momba ny fiasan'ilay vavahady tokana ilay taratasy filazàm-baovao, fa nilaza kosa fa ilaina ny fanovàna “mba hanarahana maso ireo vohikala tsy mendrika sy hanarahana ny fidiran'ny vaovao.”
Milaza ny fotodrafitrasa mampiray ny Aterineto any Thailand amin'ny tany tontolo ilay atao hoe “vavahadin'ny” Aterineto. Hatramin'ny nanafoanana ny fepetra ho an'ny sehatry TI ny taona 2006, nanamboatra vavahadin'ny Aterineto Iraisam-pirenena 10 i Thailand, iray amin'ireo ihany no an'ny fanjakana. Mety hametra ny fivezivezena malalaky ny Aterineto ny vavahady tokana, izay hanome alalana ny governemanta hanaramaso sy hanivana moramora kokoa ny votoaty amin'ny Aterineto. Mety vao mainka hanaratsy ny famerana amin'ny Aterineto any Thailand ihany koa io, indrindra mikasika ny fanarahana ny fivoaran'ilay tranga tamin'ny taona lasa, ny famindràna ny fahefana ara-politika tamin'ny miaramila, izay nametraka fepetra hentitra tamin'ny media nanomboka tamin'izay. Tsy azo atao ny hetsi-panoherana, raha toa omena sazy “fanitsiana fitondrantena” kosa ireo tsikera atao amin'ny governemanta tohanan'ny miaramila.
Nomen'ireo mpitsikera anarambositra ho toy ny “Aroafo Avobe an'i Thailand” ilay tetikasanà vavahady tokana, sarinteny amin'ilay tetikasa napetraka tany Shina mitovy amin'io koa.
Nanjohy ilay ‘fitokonana tsy hita maso’ ireo olona an'arivony
Nokarakarain‘ireo vondrona Facebook Olompirenena manohitra ilay Vavahady Tokana sy Mpilalao maka ny fahefàna hiverina aminy ilay hetsi-panoherana natao tety amin'ny Aterineto, izy ireo izay nangataka ireo mpampiasa aterineto mba hiaraka hitsidika ireo vohikalan'ny governemanta voafidy sy hanindry hatrany ny bokotry ny fanavaozana mandra-pahatonga ireo vohikala ho voatery hanakatona izany noho ny fahabetsahana diso tafahoatran'ny serasera.
Nilaza ireo mpikarakara ilay hetsika fa iray amin'ireo tanjony ny hanaporofo fa tsy mety amin'ireo mpampiasa Aterineto ao Thailand ilay vavahady tokana :
Raha tsy afaka miaro akory ireo vohikalany amin'ireo jiolahy informatika ny governemanta, ahoana no eritreretin'izy ireo hametrahana sy hisahanana vavahady tokana ho an'ny Aterineto ho an'ny zavatra rehetra mandeha ao Thailand ?
Arthit Suriyawongkul, mpandritra ny Tambajotran'ny Thailandais Mpisera amin'ny aterineto , namaritra kokoa ilay hetsika ho “fitokonana tsy hita maso” noho ny hoe fanafihana amin'ny tsy fanekena tolotra na DDoS:
Mifandray amin'ny resaka heloka bevava matetika ny fanafihana DDOS. Ny hoe fitokonana tsy hita maso na fibahanana tsy hita maso no mahalaza azy tsaratsara kokoa, izay karazana tsy faneken'ny olom-pirenena amin'ny sehatra elektronika. Eny e, raha ny marina, misy fandikàna lalàna ao amin'ny tsy faneken'ny olom-pirenena, kanefa mandika lalàna mba hahatanterahan'ireo fotokevitra izay inoan'ny vahoaka ho metimety kokoa io.
Nanamarina ny Minisitry ny TIC, Uttama Savanayana, fa nihoatra ny mpitsidika azy isan'andro izay 6.000, ka lasa 100.000, ny Alarobia hariva teo, ireo mpitsidika ny vohikalany. Antsoin'i Uttama ho hetsika kely fanairana ilay hetsi-panoherana tamin'ny vohikala fa tsy hoe heloka fijirihana Aterineto. Nanamafy ihany koa izy fa tsy manana drafitra ny hanivana ny Aterineto ny governemanta:
Tsy manana fikasàna ny hametraka zavatra toy izany ny governemanta, fa mandalina fotsiny azy io hiarovana ireo tanora. Tsy tokony hatahotra ireo vahoaka hoe hesorina ny fahalalahan'ny Aterineto.
Mila mandresy lahatra kokoa ny governemanta amin'ny fanazavàny, satria mpampiasa Aterineto maro no efa naneho ny ahiahiny amin'ny voka-dratsin'ilay fandehan'ilay vavahady tokana. Amin'izao fotoana hanoratana izao, olona maherin'ny 142.000 no efa nanao sonia ilay hetsika fanangonan-tsonia amin'ny Aterineto “Andao hanohitra ny governemanta Thailandais amin'ny fampiasàna ny Vavahady Tokan'ny Aterineto” ao amin'ny Change.org.
#SingleGateway (Vavahady Tokana) : inona no lazain'ireo bitsika
Nalaza tao Thailand ilay tenifototra amin'ny Twitter hoe #SingleGateway, nandritra ilay hetsika tamin'ny Aterineto. Miampanga ny governemanta ho tsy maharesy lahatra amin'ireo antony hanohizany ny sosokeviny ireo bitsika sasany:
Voalohany izy ireo niteny hoe ho an'ny ”filaminam-pirenena” ilay #singlegateway, avy eo ho an'ny ”fahafahan'ny IT mifaninana amin'ny hafa”, amin'izao indray fanarahana maso ”ireo tanora”?!
Ny sasany ihany koa nanome sosokevitra ny governemanta mba hifantoka amin'ireo lalàna sy fanavaozana mifandraika amin'ny Aterineto:
Inona no tokony hifantohan'i Thailand noho ny #singlegateway : fampivoarana ny fahazoana ny Aterineto any amin'ireo faritra ambanivohitra & manohy ny adihevitra amin'ny fitantanana ny Aterineto.
Tsy ireo mpikatroka mafana fo ihany no manohitra ilay hevitra hanaovana vavahady tokana. Matahotra ihany koa ireo tomponà fandraharahàna hoe sao mahatonga fihisàrana amin'ny fandehan'ny Aterineto io, izay mety hisy fiantraikany amin'ny sehatry ny varotra atao amin'ny Aterineto. Tsy niombon-kevitra tamin'ny fiarovantenan'ny governemanta ihany koa izy ireo, izay nilaza fa hampihena ny saran'ireo fifandraisana amin'ny Aterineto ilay vavahady tokana.
Fa mino kosa ny filohan'ny polisy, Somyot Pumpanmuang, fa ho tsara amin'ny filaminan‘ny firenena ny fisian'ny vavahady tokana amin'ny Aterineto:
Raha mbola manohy mampiasa io fomba fiasa [ankehitriny] io ny Thailandais, rehefa miditra ireny hafatra ireny, mila olona manaraka maso azy ireny izahay, ary miankina amin'ny media na ny vahoaka mba hitatitra tsirairay any amin'ny polisy ireo hafatra manohintohina. Efa im-betsaka aho no nIteny momba an'io tamin'ny governemanta . Tokony hisy vavahady tokana handehanan'ny Aterineto eto Thailand.
Namoaka lahatsoratra ny gazety an-tsoratra Bangkok Post, milaza fa fepetra tsy ilaina ny fampiasàna vavahady tokana ho an'ny Aterineto, ary mety hanosihosy ny fiainana manokan'ny mpampiasa Aterineto ao Thailand:
Ho an'ny governemanta sy ireo masoivohon'ny fiambenana ny hany tombony tokana azo amin'io. Ho afaka hihaino, hanivana, hametra ary hanaraka maso an-tsokosoko ireo zavatra rehetra alefa sy voaray avy amin'ireo mpampiasa Aterineto rehetra izy ireo.